PressReader - Isolezwe: 2018-07-12 - Intsha yomele ulwazi lwesimanje
Intsha yomele ulwazi lwesimanje
Isolezwe - 2018-07-12 - EZOMNOTHO - INTATHELI YESOLEZWE
BANINGI abantu abasha abomele ulwazi lwamabhizinisi. Lokhu kucace emcimbini weDurban Chamber of Commerce and Industry (DCCI) obizwa ngeYoung CEO’s Breakfast.
Lo mcimbi ubuseMngeni, eThekwini muva nje. Yize bengu-60 osomabhizinisi abancane abebeqinisekise ukuthi bazofika emcimbini kodwa kufike abangaphezu kuka-150.
Abasebenzi beDCCI babe nenkinga yokufunela abantu izihlalo ngenxa yokugcwala kwehholo.
Osomabhizinisi abancane bebezolalela ukuthi ezobuchwepheshe zinaqhaza lini ekukhuliseni ibhizinisi nomnotho wezwe.
Isikhulu esiphezulu seDCCI esisanda kuqokwa, uNkk Palesa Phili, sithe sijabule kakhulu ngosomabhizinisi abancane abafikile, okukhombisa ukuthi umnotho wezwe uzokhula.
“Kuyacaca ukuthi intsha yomele ulwazi lwamabhizinisi ngoba kufike isibalo esikhulu kunaleso ebesisilindele. Ngenxa yokubona ukuthi baningi osomabhizinisi abasebasha abafuna ulwazi sizokwethula iTech Forum, lapho sizokhuluma ngeqhaza lezobuchwepheshe emabhizinisini,” kusho uNkk Phili.
UMengameli weDCCI, uMnuz Musa Makhunga, uthe bafuna ukugxila kwezobuchwepheshe ngoba ucwaningo lukhombisa ukuthi lo mkhakha unomthelela omuhle emabhizinisini.
“Ubuchwepheshe yibona obuzosebenza eminyakeni ezayo futhi kufanele siqale manje ukubheka amathuba akhona kulo mkhakha.
“Osomabhizinisi abancane siyabagqugquzela ukuthi basebenzise ubuchwepheshe besimanje ukuze bangenise imali ezinkampanini zabo,” kusho uMakhunga.
Bekukhona noNksz Eleni Kwinana, oyinhloko yophiko lwamabhizinisi kwaVodacom otshele osomabhizinisi ukuthi mabangene kwezobuchwepheshe uma befuna ukwenza izinto zenzeke.
“Izikhulu ezincane zamabhizinisi zisebenza esikhathini esihlukile ngoba ezobuchwepheshe zihamba phambili. Amabhizinisi enziwa kwi-internet ngisho nemikhiqizo eminingi ihanjiswa ngayo.
“Sikhuluma ngezinto ezibizwa nge-artificial intelligence lapho ungasadingi ukuba namahhovisi ahlukene ezingxenyeni zomhlaba kodwa usukwazi ukwenza yonke into kwikhompyutha nakwiselula,” kusho uNksz Kwinana.
UDkt Brian Armstrong onguSihlalo weDigital Business eWits Business School, uthe: “Kubalulekile ukuthi abaholi bamabhizinisi nazo zonke izikhungo bafunde ngemikhakha abakuyo ukuze benze izinqumo eziphusile.”